SMS တွေကို ကိုယ့်နံပတ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ ဘယ်လိုပို့မလဲ? -
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို အရေးပေါ်အနေနဲ့လား? လျှိ့ဝှက်တဲ့အနေနဲ့လား ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ Anonymous အနေနဲ့ Message ပို့နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ Website အချို့ကို ဝေမျှပေးသွားပါမယ်…
ဒီဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဖြစ်ဖြစ် လျှိ့ဝှက်ပြီးပို့ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပြေ SMS ပို့သွားနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Wednesday February 10th, 2021/ Blog/0Comment